सु’हाग-रा’तमा बे’हुलीको म’हिना-वा’री सुरु भ’यो! श्री’मान् को चाहना पूरा नगर्दा के गरे यस्तो? - Samachar Post Dainik
सु’हाग-रा’तमा बे’हुलीको म’हिना-वा’री सुरु भ’यो! श्री’मान् को चाहना पूरा नगर्दा के गरे यस्तो?
महिला अधिकारका कुरा गर्दा धेरै देशहरु अझै पछि नै छन् ।
यस्तै एक समाचार इजिप्टको छ, जहाँ एक महिलाको कथा सुन्दा जिउ काँ प्छ । त्यहाँ एक पुरुषले बिहे गरे ।तर जब सुहाग-रातको समय भयो, दुलहीको महिना-वारी सुरु भयो । त्यसपछि उनी सह-वासका लागि राजि भइनन् । रिसाएका उनका पतिले उनलाई कु ट पी ट गरे र क र णी गरे ।
यसले नयाँ दुलहीको मनो भावनामा गहिरो चोट पुग्यो ।हालै इजिप्टमा एक टिभी कार्यक्रममा देखाइएको यस्तै एक दृश्य पछि धेरै महिलाहरूले उनीहरूसँग भएका आफ्ना नराम्रो अनुभवहरू सोशल मिडियामा साझा गरिरहेका छन् ।
ती पोष्टहरू मध्ये एउटी महिलाले भनिन् कि उनका लोग्ने धेरै अद्भुत व्यक्ति थिए तर जब उनी गर्भ-वती भइन् उनले नराम्रो व्यवहार गरे जसको कारण उनको जीवन पूर्णरूपमा परिवर्तन भयो ।उसको पोष्टमा यो लेखिएको थियो कि ‘पतिको ब्य त्त्वि त राम्रो थियो । जब हामी विवाह गरेको एक बर्ष भयो, त्यस समयमा म गर्भ-वती भएँ र म डेलि-भर गर्न लागेकी थिएँ ।
यति बेला मेरा पतिले मलाई स जा य दिने निर्णय गरे ।उनले स जा य स्वरुप मलाई कु ट पी ट गरे अनि ममाथि क र णी गरे । यसले गर्दा मेरो गर्भ-पात भयो ।
लामो कानुनी झ न् झ ट पछि मेरो पतिसँग स म्ब न्ध-वि च्छे द भयो र उहाँबाट अलग भएँ तर अहिले पनि मेरो बच्चा गु मा उ ने पी डा मेरो दिमागमा छ ।
राष्ट्रिय महिला काउन्सिलको प्रतिवेदन अनुसार इजिप्टमा प्रत्येक वर्ष औसत ६५०० वटा घटना भएको पाइन्छ जसमा पतिहरूले वैवाहिक अवस्थामै उ त्पी ड न गरेका छन् ।
त्यहाँ स्थापित महिला केन्द्रका एक वकिल र कार्यकारी निर्देशकले बीबीसीसँग कुराकानीमा भनेका छन् कि इजिप्टमा एउटा सामान्य संस्कृति रहेको छ, जसको अनुसार एक महिला पतिका लागि २४ घण्टा नै सह-वासका लागि तयार रहनु पर्छ ।
कयौँ मानिस यस्ता हुन्छन्, जो धनवान बन्नका लागि कयौँ उपाय अपनाउछन्। तर पनि सफल हुँदैन। जबकी केही मानिस कम मेहनत मै अधिक सफलता हात पार्छन र धनवान हुन्छन्। जसको ठूलो कारण हुन्छ ग्रह र नक्षत्रको चाल।सफलताको पछाडि मेहनत र योगदान हुन्छ।तर सफलताको मार्गमा ग्रह र नक्षत्रको पनि ठूलो भूमिका रहन्छ।
@केही मानिसको जन्म शुभ मुहूर्त अर्थात निकै राम्रो समयमा हुने गर्छ। जसका कारण उनीहरु जन्मदेखि नै भाग्यमानी सावित हुन्छन्।यस्ता मानिसको जन्म धनी परिवारमा होओस् वा गरिब ।
यिनीहरुलाई सफल र धनी बन्न कसैले रोक्दैनन्। आज हामी त्यस्ता केही राशिका बारेमा जानकारी दिदैछौँ । जो जन्मजात नै भाग्यमानी हुन्छन्।आउनुहोस् जानौँ कुन कुन हुन् ती राशि ?मिथुन राशि:यस राशिका मानिस निकै भाग्यमानी मानिन्छन्।
यस राशिका व्यक्तिलाई हरेक काममा सफलता मिल्ने गर्छ। अन्य मानिसको भन्दा यस राशिका मानिसलाई दुई गुणा बढी सफलता मिल्ने गर्छ। जन्मसिद्ध भाग्मानी मानिने यी राशिका व्यक्तिलाई सधैँ भाग्यले साथ दिने गर्छ।सिंह राशि:सिंह राशिका मानिसको दिल निकै ठूलो हुने गर्छ। तर पैसाको मामिलामा भने यिनीहरु थोरै कन्जुस हुने गर्छन्। जसका कारण यिनीहरुले धेरै बचत गर्ने गर्छन् र भविष्यमा हानी कहिलै खेप्नु पर्दैन्।
साथै यस राशिका मानिस अरुका सामु झुक्न रुचाउँदैनन्।कुम्भ राशि:फैसला त जो कोहीले लिने गर्छन्। तर कुम्भ राशिका मानिसले कुनै पनि निर्णय लिनुभन्दा अगाडि आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्ने गर्छन्। कसैले भने सुनेकै भरमा यिनीहरुले काम गर्दैनन्।यस राशिका मानिसले बोल्दा संयम पुर्याउने गर्छन्।
पैसा कमाउनु यिनीहरुका लागि खेल जस्तै हुने गर्छ। जुन क्षेत्रमा हात हालेपनि सफलता मात्रै मिल्ने गर्छ।यो पनि पढ्नुहोस् :अनौठा र अत्यन्तै शक्तिशाली मन्दिर जहाँ जे मागे पनि पूरा हुनेगर्छ,ॐ लेखि सेयर गर्नुहोस !!;भगवान, इश्वर, अल्लाह जे जे ले पुकारेपनि देवत्वमा विश्वास नगर्ने मानिस विश्वमा नै कम छन् ।
हुनपनि हो आखिर सृष्टिमा केही न केही तेस्रो शक्तिको देन छ ।यही मन्दिरहरुमा अति विश्वास भएको ठुलो केदार नेपालको डोटी जिल्लामा अवस्थित एक मन्दिर हो । यो मन्दिरलाई सुदूर पश्चिमकै प्रख्यात मन्दिर मनिन्छ ।ठुलो केदारलाई गौतम गोत्रिय चन्दहरूले कुल देवताको रुपमा पूजा गर्दछन् । यो मन्दिर डोटी बोगटानमान्ना कापडी गाउँ विकास समितिको पूर्वउत्तर,
।धिर्कमाण्डौ र सातफेरी गाउँ विकास समितिको दक्षिण,लाना केदारेश्वर गाउँ विकास समितिको उत्तर र सिमचौर गाउँ विकास समितिको उत्तरवाट पश्चिमको शिखरगरी ।पाँच गाउँ विकास समितिको बीचमा पर्ने २८९१ मिटरको अग्लो केदारेश्वर लेकमा भगवान ठूलाकेदार विराजमान रहेकाछन् ।
यो क्षेत्र उपल्लो वोगटानमा पर्दछ ।डोटी जिल्लामा केदारका मन्दिर माडौं पौराणीककाल देखिनै प्रत्येक स्थानमा रहेको मान्यता छ । यी सबैको मूलस्थान ठूला केदारलाई मानिन्छ ।
डोटी वोगटान लानाकेदारेश्वरको उत्तरको लेकको पहरोको चुचुरोमा केदारको शिला रहेको छ । यो शिला दुई ठूला ढुङ्गाको बीचमा अलि समथर स्थानमा छ ।ब्राह्मणहरुले यसगाथमा उक्लने सिडीभन्दा तल दुई ढुङ्गाको बीचमा बाटोको वरपर वडारमा बसेर केदारको पाठपूजा गर्ने गर्दछन् ।
यस जात्राको देउरामा आएका चोखा जातका धामी मात्र गाथमा गएर नाँच्ने गर्दछन् । अन्य जातका मानिसहरु अर्को एउटा ठूलो ढुङ्गा माथिमा गएर नाँच्ने गर्दछन् । यिनै केदारका पुत्र कार्तिकेय मोहन्याल मानिन्छन् ।
प्रकाशित मिति ११ कार्तिक २०७८, बिहीबार ०८:४८
पाथीभरामा एकैदिन १४ पाथी सिक्का भेटी ॐ लेखी फोटो छोएर शेर गर्नु
मेरो योनि चिलायो कोही हुनुहुन्छ ?
जंगलको बिचमै परि तामाङलाई यस्तो गरेपछि …. (भिडियो सहित)
रङेहात भेटिएका देवर भाउ जु खाटमुनि लुकेका रहेछन,श्रीमतीलाई छु री देखाएर भागे,अब के होला ?